Umatshini wokususa iinwele-China Abenzi bokususa iinwele, abaXhasi
Oomatshini bokuhlaziya ulusu kwiiklinikhi zobuhle kunye ne-Spa
• Ukuncitshiswa kweenwele ngokusisigxina
• Izilonda zemithambo
• Ukonakaliswa lilanga
• Umbala we-Epidermal
• Ukuhlaziya ulusu
• Amabala kunye nokunye
Ukususwa kweenwele kwe-IPL 5 Wavelengths Ipl Umatshini ophathekayo
Ukususwa kweenwele ngokusisigxina: Ikhwapha iinwele ezongezelelekileyo, imilenze, imilebe, okanye amanye amalungu omzimba.
Re Ukuvuselelwa kwesikhumba: Shwabanisa ii-pores, qinisa ulusu, ukuphucula ulusu luthambe kunye ne-gloss.
Ukususwa kwe-pigment: susa iindidi zombala ezinje ngamabala, i-chloasma, i-senile plaque, ukutshiswa lilanga, njalo njalo.
Umsebenzi oSebenzayo u-Shr + elight + ipl Umatshini wokuSusa iiNwele eziPhezulu
Umatshini we-IPL oSebenzayo oMatshini abaSebenzisa izixhobo ze-Spa DPL IPL Freckle Ukususwa koLusu
Umatshini wokususa iinwele ophathwayo u-600w 808nm
I-P-MIX 755 808 1064nm Umatshini wokususa iinwele we-laser ikakhulu kukususwa kweenwele.
Njengokususa ngokusisigxina iinwele zomlomo, iinwele zeendevu, iinwele zesifuba, iinwele zekhwapha, iinwele zamalungu kunye neenwele ezingafunekiyo kuwo nawaphi na amalungu omzimba. Kufanelekile kuzo zonke iintlobo zolusu kunye neenwele.
Ukususwa kweenwele kwe-2000W 755 + 808 + 1064nm
1200W 755 + 808 + 1064nm umatshini wokususa iinwele we-laser
2000W 808nm diode laser umatshini ukususwa iinwele
I-HIDL-808-2000 isebenzisa amandla aphezulu e-diode laser diode ye-808nm, enokwenza unyango lokususa iinwele kulo lonke uhlobo lolusu kunye nohlobo lweenwele ngokufanelekileyo. Kwisandla, kukho ii-PC ezingama-20 ii-laser bars, zisebenzisa i-laser coherent laser bar. Ubomi bobomi abukho umda wokudubula, ungayisebenzisa ngalo lonke ixesha. Kwisandla, kukho isikrini seLCD, inokubonisa amandla kunye nokuhamba rhoqo, ngokulula ngakumbi ukuba umqhubi enze unyango.
Umatshini wokususa iinwele we-1200W 808nm
I-HIDL-808-2000 isebenzisa i-diode ye-diode ye-808nm, ukudibanisa ne-2000W intloko yonyango lwamandla. Yintoni enokwenza unyango lokususa iinwele kulo naluphi na uhlobo lolusu kunye nohlobo lweenwele ngokufanelekileyo. Ke lo matshini uyathandwa kwiklinikhi yeenwele, i-salon yobuhle njl.
12 Okulandelayo> >> Iphepha 1/2
Ubuhle be-CO2 Laser, Shr Opt Ipl Ukususwa kweenwele, Umatshini weLaser we-Co2, Ukususwa kwamabala amabala, Shr IPL Khetha, Umatshini wokukhuthaza izihlunu ze-Ems,